Sina Bambu diffuser, diffuseur d'oratry ny menaka Bambre, mpanamboatra sy menaka mpamatsy menaka akondro
Description:Bucuvers diffuser,Fampitaovana menaka akorandriaka,Fampivadiana menaka ampongaina menaka,Aromatherapy diffuser,,
Home > Products > Bucuvers diffuser
Ny vokatra avy amin'ny Bucuvers diffuser , mpanofana manokana avy any Shina, Bucuvers diffuser , Fampitaovana menaka akorandriaka mpamatsy / orinasa, vokatra avo lenta avoakan'ny Fampivadiana menaka ampongaina menaka R & D sy ny famokarana, manana ny tolotra lavorary lavorary isika ary fanohanana ara-teknika. Miandrandra ny fiaraha-miasanareo!
Ultrasonic Cool Mist Bamboo Aroma diffuser Young Living  Contact Now
Tariby varahina tariby mora azo ampiasaina Ultrasonic Cool Mist Humidifier  Contact Now
Bamboo Ultrasonic Aromatherapy tena ilaina menaka Aroma diffuser  Contact Now
2019 Bamboo diffuser Tena ilaina menaka Ultrasonic  Contact Now
Fitaovana tsotra fanamboarana fantsom-borona mavom-borona kely  Contact Now
Fitiavana endrika tsara tarehy Bosa Ultrasonic Aroma diffuser  Contact Now
Miarina amin'ny fihenan-tsolika azo avy amin'ny volotsangana Bambu Aromatherapy  Contact Now
Fanafody menaka fanalefahana ala-manga  Contact Now
Bambu tena ilaina menaka mangatsiaka Humidifier Ultrasonic  Contact Now
Ultrasonic Cool Mist Bamboo Aroma diffuser Young Living 120ml menaka manan-danja esorina miaraka amin'ny akorandriaka ivelany voajanahary vita amin'ny hazo volotsangana akora. Modely amin'ny fanaraha-maso Smart-Mist / Halavam-pohy mitohy...
Tariby varahina tariby mora azo ampiasaina Ultrasonic Cool Mist Humidifier
Vidin'ny singa: USD 10.46 - 9.54 / Piece/Pieces
Tariby varahina tariby mora azo ampiasaina Ultrasonic Cool Mist Humidifier Aroma Oil diffuser, Ultrasonic air humidifier, ioniser, rivotra purifier ary hazavana am-pitiavana! Tsotra ampiasaina - manampy rano fotsiny, menaka ary mihodina. Ny...
Bamboo Ultrasonic Aromatherapy tena ilaina menaka Aroma diffuser Famolavolana lamaody sy kiraro mampitony: Bamboo diffuser, mifanentana amin'ny haingo trano. Toa ny tena volotsangana. Tsindrio ny bokotra hoe halatra mba hisafidianana fomba...
2019 Bamboo diffuser Tena ilaina menaka Ultrasonic
Vidin'ny singa: USD 16.77 - 18.15 / Piece/Pieces
Fonosana: Boaty anatiny: 150 * 150 * 195mm; Carton master: 46.5 * 31.5 * 41cm / 24pcs
2019 Bamboo diffuser Tena ilaina menaka Ultrasonic Miaraka amin'ny fitsaboana maivana izay azo apetraka amin'ny loko iray na navonoina, mampiasa ny halatra mangatsiaka i Aroma diffuser ka tsy ho mafana. Ny fomba fampiasana: Ka mora, esory...
Fitaovana tsotra fanamboarana fantsom-borona mavom-borona kely
Fitaovana tsotra fanamboarana fantsom-borona mavom-borona kely Bamboo diffuser dia mampiasa teknolojia avo lenta avo lenta mifangaroharo rano ao anaty zorony mamorona zavona tsara tarehy any anaty rivotra. Rehefa ampiana ny menaka ilaina, dia...
Fitiavana endrika tsara tarehy Bosa Ultrasonic Aroma diffuser
Fitiavana endrika tsara tarehy Bosa Ultrasonic Aroma diffuser Ireo mpanelanelana ultrasonika dia mampiasa angovo ultrasonic izay ny onjan-drivotra mandroaka toy ny zavona any anaty rivotra. Io fomba fandroahana io dia tsy mampiasa hafanana fa kosa...
Miarina amin'ny fihenan-tsolika azo avy amin'ny volotsangana Bambu Aromatherapy
Fanafody menaka olivaora-menaka akora Ampio fotsiny ny rano misy paompy sy menaka ilaina Tena milamina ary mora diovina Halatra mangatsiaka / tsy misy hafanana tafiditra / tsy misy atahorana ny may may Ultrasonic diffuser tapaka tsy tapaka...
Fanafody menaka fanalefahana ala-manga
Fanafody menaka fanalefahana ala-manga De-stink an-tranonao: Ny atomisma ultrasonika amin'ny aromatherapy, dia mihazona ny fofon'ny menaka manankarena mandritra ny andro amin'ny vidiny mirary; miala sasatra, manome hery, manampy...
Bambu tena ilaina menaka mangatsiaka Humidifier Ultrasonic
Bambu tena ilaina menaka mangatsiaka Humidifier Ultrasonic Ny tena volavolan-tsambo tena vita amin'ny bamboo sy ny endrika tsara tarehy: miaraka amin'ny fijery mahavariana sy voajanahary, ity diffuser volotsangana ity dia vita amin'ny...
Shina Bucuvers diffuser mpamatsy
Ahoana ny fomba fampandehanana ny fampiatoana ny volotsangana?
1. Mametraha miorim-bolo mihetsika ny volotsangana volavola, Pull miakatra ambony ka esorina ny sarony.
2. Ampifandraiso amin'ny fantsom-pahefana DC adapter ao amin'ny fototry ny Bamboo Oil diffuser. Aroso amin'ny làlan-tariby amin'ny alàlan'ny làlana nomena.
3. Ampio ny rano sy menaka tena izy ao amin'ny diffuser aromaterapy.DO TSY tafahoatra ny tsipika '' MAX ''. TSY mampiasa rano mangotraka. AZA hofenoina rehefa mandeha ny fahefana. Aroso ny hanisy menaka ilaina amin'ny menaka 2-3 isaky ny rano 100ml.
4. Atsofohy ao ny rakotra. Ny spout dia azo haverina mba hitarihana ny hanitra ho amin'ny làlana irina. Fampiasa menaka manitra Bamboo dia tsy tokony hampiasaina raha tsy misy rakotra.
5. Mampifandray adapter AC amin'ny herinaratra avy amin'ny rindrina.
6. Tsindrio ny bokotra "MIST" hisafidy ny fotoana fampiasana raha ilaina (ON-nao / 3 ora / 6 famafiana). Ny diffuser dia hamono ho azy avy hatrany amin'ny fotoana voatondro. Raha mamono avy hatrany dia zohy ny bokotra "MIST".
7. Tsindrio "Light" mba hametahana fahazavana LED. Ny fahazavana dia azo ampiharina amin'ny tsingerim-potoana manaraka (Bright-Dim-Off).
8. Aroso ny manondraka rano amin'ny kamiao ary hihary maina mandritra ny fotoana maharitra.
9. Rehefa mifandray amin'ny herinaratra, ny fanjakana tany am-boalohany amin'ny diffuser ultrasonic dia tsy mbola mandeha.
10. Ny fikorontanana sy ny hazavana dia hijanona ho mandeha avy hatrany rehefa tsy ampy rano, na dia tsindry "MIST", ny fofona manitra dia mihodina mandeha ho azy koa.
Bucuvers diffuser Fampitaovana menaka akorandriaka Fampivadiana menaka ampongaina menaka Aromatherapy diffuser Scher Desk diffuser